Afar haween ah oo lagu dilay Maraykanka - iftineducation.com
iftineducation.com – Afar haween ah ayaa toogasho lagu dilay iyaga oo jooga suuq laga dukaamaysto oo ku yaalla Burlington, oo ka tirsan gobolka Washington, waxaa sidoo kale si xun u dhaawacmay nin kale.
Booliiska ayaa baahiyay sawirrada ninka laga shakisan yahay, kaas oo isaga cararay goobtaasi isaga oo qori ku hubaysan.
Waxaa la daad gureeyay dadkii ku sugnaa xarunta laga dukaamaysto ee Cascade Mall iyo dukaamadii kale ee ka ag dhawaaba. Wali ma cadda ujeedada laga lahaa weerarkaas.
Ninka laga shakisan yahay waxaa lagu tilmaamay nin ka soo jeeda dadka Hispanic loo yaqaanno, waxaana la arkayay isaga oo ku sii cararaya dhanka 5 motorway
Mark Francis oo u hadlay booliiska roondada ee gobolka Washington ayaa sheegay in dilkaasi uu si gaar ah uga dhacay gudaha dukaanka Macy’s.
Wuxuu intaas ku daray in Gurmadka dagdaga ah iyo kooxaha caafimaadka ay galeen gudaha xarunta dukaamaysiga iyo kiniisad ka ag dhaw oo dadka lagu daad gureeyay si ay u caawiyaan dadka dhaawaca ah.
Francis wuxuu sheegay in ninka hubaysan uu ka tagay goobta ka hor inta uusan booliisku soo gaarin aaga uu dhibku ka hacay
Waaxda sirdoonka ee dalka Maraykanka ee FBI oo gacan ka gaysanaysa baaritaanka ayaa sheegay in aysan jirin wax cadayn ah oo loo hayo in uu jiro dagaal kale oo la qorsheeyay in uu ka dhaco gobolka Washington.
Burlington waxay 104 kiiloo mitir u jirtaa Seattle.